Xiddigaha Liverpool ee Joe Gomez iyo Jordan Henderson oo la xaqiijiyey inay ka maqnaan doonaan Xulkooda England kulanka soo aaddan – Gool FM
(Liverpool) 16 Nof 2019. Xiddigaha Kooxda kubadda cagta Liverpool ee Joe Gomez iyo Jordan Henderson ayaa la xaqiijiyey inay seegi doonaan kulanka ugu dambeeya ee isreeb-reebka Euro 2020 oo uu xulkooda England la dheeli doono Kosovo.
Kulanka ugu dambeeya ee xulka England uu ciyaari doono isreeb-reebka Euro 2020 isla markaana ay Axadda la dheeli doonaan Kosovo ayey seegi doonaan labadaan ciyaaryahan ee ka tirsan kooxda Reds, Joe Gomez iyo Jordan Henderson.
Joe Gomez ayaa dhaawac jilibka ah uu ku soo gaaray tababarkii Jimcihii, halka Jordan Henderson uu ku guuldarreystay inuu ka soo kabsado virus seejiyey inuusan ka qeyb qaadanin guushii ay ka gaareen Montenegro Khamiistii.
Gomez ayaa ku dhaawacmay tartan uu la galay Kieran Trippier intii lagu jiray tababarka xulka Jimcihii, laakiin dhaawacaas looma arko inuu halis yahay.
Bayaan ka soo baxay xulka qaranka England ayaa u dhignaa: “Jordan Henderson iyo Joe Gomez waxa ay seegi doonaan kulanka ugu dambeeya England ee isreeb-reebka UEFA EURO 2020 oo aan Axadda la dheeli doono Kosovo.”
“Henderson wuxuu yimid xerada Tababarka isagoo leh caabuq virus oo aan si buuxda u bogsan, dhanka kale saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin Liverpool ee Gomez ayaa dhaawac uu ka soo gaaray tababarka Jimcihii mana uusan helin in ku filan oo uu ku safro.”
“Labada ciyaaryahan ayaa haatan ku laabtay kooxdooda, taasoo la micno ah in Saddexda Libaax ay aadi doonaan Pristina maalinta Sabtida ah, iyagoo shaxddooda ku haysta 23 xiddig.”